Samsung Galaxy S8 and S8+ unveiled with 'infinity display' - News Fitsipika
Samsung Galaxy S8 sy S8 + tsy misarom-boaly amin'ny 'Infinity Display’
Marika manantena ny handresy indray mpanjifa matoky aorian'ny Note 7 debacle amin'ny finday vaovao efa ho tanteraka izany bezel-maimaim-poana, ary ahitana ny mpanampy virtoaly vaovao
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Samsung Galaxy S8 sy S8 + tsy misarom-boaly amin'ny 'Infinity Display'” dia nosoratan'i Alex Hern, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 29 Martsa 2017 15.44 UTC
Samsung Galaxy dia tsy misarom-boaly ny S8 sy S8 +, ny orinasa telefaonina flagship voalohany hatramin'ny Fanamarihana 7 debacle amin'ny 2016 Nandrahona ny nilentika ny marika eo imason 'ny vahoaka.
Ny finday vaovao 'maso-misambotra indrindra endri-javatra dia efa ho tanteraka bezel-fampisehoana maimaim-poana, mihazakazaka ny sakan'ny feno ny fitaovana, na dia curving manodidina ny sisin'ny (Mitovy amin'ny fanakonana amin'ny Samsung ny Galaxy S7 Edge), ary fihenan'ny amin'ny saokany sy ny handriny ny lamba ho kely aloha slivers. Samsung ny antso io ny "Display Infinity", ary na dia ny an-trano ny bokotra dia efa nesorina, nosoloina ny tsindry-saropady fizarana eo amin'ny farany ambany ny efijery.
fandefasana amin'ny 28 Aprily (na dia mialoha ny mpanjifa mba handray azy isan-kerinandro aloha), S8 ny Galaxy dia Varotra amin'ny £ 689 sy ny S8 + amin'ny £ 779. Ireo vidin-javatra dia £ 10 sy £ 40 mora vidy kokoa noho ny iPhone tsirairay modely Samsung no mifaninana miaraka amin'ny, fa mandao ny £ 120 S8 mihoatra noho ny S7 sy ny S8 + £ 140 lafo kokoa noho ny S7 Edge. Loko roa no namely an'i Grande-Bretagne, "Midnight Black" sy "Orchid Gray", sy ny Samsung dia mbola nanapa-kevitra ny hanomboka na ny loko fahatelo, "Arctic Silver".
Izany dia mamela ny roa fitaovana, amin'ny efijery ny 5.8in sy ny 6.2in ​​tsirairay avy, hibodo ny tenan'ny an-tariby tamin'ny kely be maneho. The Galaxy S8, ohatra, dia manana ny lafiny 148.9 X 68.1 X 8mm, mitovitovy ny centimeter fohy ary teritery kokoa (0.7mm na matevina) noho ny iPhone 7 Bebe Kokoa, na dia teo aza manana 0.3in efijery lehibe kokoa.
Ny Samsung Galaxy S8, amin'ny bezels kely ara-batana ary tsy misy an-trano ny bokotra. Sary: Alex Hern ho an'ny Guardian
ny lamba fanakonana, amin'ny fanapahan-kevitra ny 2960 X 1440 teboka roa modely, ihany koa ny voalohany amin'ny finday ho laharana ho Mobile HDR Premium, manamarina izany ho fivoriana iray ambony izany fitsipika izany ho afa-po isan-karazany mavitrika - mampiseho mainty mainty hoditra, mamirapiratra fotsy hoditra ary ny ankapobeny-java-mamirapiratra lehibe isan-karazany noho ny ankamaroan'ny finday.
Inside ny fitaovana dia octacore Chip (efatra cores nahavita amin'ny 2.3Ghz sy efatra amin'ny 1.7Ghz), ny voalohany eo amin'ny smartphone mba hatao ao amin'ny 0.1 micron dingana famokarana, miaraka amin'ny 4GB Rama sy 64GB ny Flash fitehirizana. Koa hanolotra ny fanitarana slot ho an'ny microSD karatra: raha Samsung nanaisotra ny slot ho an'ny Galaxy S6, avy amin'ny S7 manomboka, tompony no afaka slot ao amin'ny karatra SD ho an'ny fitehirizana fanampiny.
Ny ambadiky ny Galaxy S8. Sary: Alex Hern ho an'ny Guardian
Na dia betsaka toy izany afa-tsy ny efijery, roa no iray habe fahasamihafana hafa: lehibe kokoa eo amin'ny lehibe kokoa bateria modely, naoty amin'ny 3,500mAh, raha manana finday ny kely fitahirizana ny 3,000mAh.
S8 ny Galaxy dia an-tsambo amin'ny Android 7, Nougat, izay vao haingana indrindra amin'izao fotoana izao ny dikan-Android. Tsy noho ny ho voasolon'ny fivavahana amin'ny lafiny fahatelo ny 2017 amin'ny Android O.
Ny fakan-tsary eo amin'ny fitaovana roa mbola betsaka mitovy ho an'izay any amin'ny Galaxy S7: A 12MP-miatrika aoriana fakan-tsary, amin'ny Optical sary stabilization, ary ny 8MP selfie fakan-tsary, na miaraka amin'ny hazavana miditra F1.7. Tafiditra koa dia tondro sensor ao ambadiky ny fitaovana, akaikin'ny ny fakan-tsary, ary ny tavany hanalana ny hitsoka ao endri-javatra.
Ny pototry ny Galaxy S8, amin'ny headphone Jack. Sary: Alex Hern ho an'ny Guardian
Zavatra iray izay no maty ny fanavaozana dia ny headphone Jack. , Enim-bolana taorian'ny Apple nandray ny hafanana ny halefa sambo ny iPhone 7 tsy misy fitsipika 3.5mm plug, S8 ny Galaxy mbola manana toerana ho seranan-tsambo taloha.
Ny fanafahana lehibe tonga amin'ny fotoana Samsung. Taorian'ny Note 7 loza, izay nahita fitaovana nampahatsiahy rehefa tratra-tsitrapo maro afo, ny orinasa nanomboka ny fe-potoana retrenchment, trumpeting hanafahana ny dokam-barotra nalaza ho fiarovana sy nitady hamerana ny fahavoazana midadasika kokoa ho amin'ny marika.
"Ny marika very laza sy ny mpanjifa matoky ny debacle ny Galaxy Note 7", hoy i Thomas Husson, filoha lefitra sy ny lehibe tao Forrester mpandalina. Ankoatra, "Samsung ihany no manana ny varavarankely ny fahafahana ny volana maromaro talohan'ny fanokafana ny faha-10 taonan'ny iPhone,"Antenaina ho tonga amin'izao fotoana izao tamin'ny Septambra tamin'ny bezel-maimaim-poana toy izany koa ny famolavolana.
"Ny fanombohana ny Samsung ny finday avo lenta flagship vaovao dia izao no fanalahidy ho an'ny marika, na dia efa niezaka ny hampihena ny fiankinan-doha amin'ny finday avo lenta raharaham-barotra, mifanohitra amin'ny Apple,"Hoy Husson. "Ny fanokafana ny fitaovana vaovao tsara dia tsy maintsy novonoina noho ny Samsung mba hahazo fitarihana sy ny fanavaozana ny hahazo tsena anjara ao amin'ny finday avo lenta avo-ampahany farany."
Miaraka amin'ny finday vaovao, Samsung no namoaka na fanavaozana maromaro mifandray vokatra. Ny Gear VR headset, ny mpiara-ny famokarana amin'ny Facebook ny Oculus division, Nahazo Wireless fihetsika-monina lavitra fanaraha-maso, raha ny Gear 360 fakan-tsary dia upgraded ny fahafahana hiaina-stream 360˚ lahatsary, ny orinasa filazana zavatra mety ho "iray amin'ireo teboka tipping" ho miely patrana virtoaly fananganan'anaka amin'ny zava-misy.
S8 ny Galaxy ihany koa ny hanomboka amin'ny Samsung mpanampy virtoaly vaovao, Bixby, natao hifaninana amin'ny Google mpanampy ary ny Apple Siri (manjavozavo, Google Assistant ihany koa hita ao amin'ny S8). Bixby manome toy izany koa multi-Modal endri-javatra teo amin'ny Google Assistant, afaka azo hampiharina amin'ny alalan'ny feo na amin'ny alalan'ny fakan-tsary sy ny mifandray amin'ny entana onscreen (mamela ny mpampiasa ny hoe, ohatra, "Fametraka ity tahaka ny temotra" rehefa mijery sary), fa ny fanompoana manontolo no afa-tsy tamin'ny voalohany Korea fandefasana sy, from May, ny USA. Ireo mpampiasa avy amin'ny firenena hafa dia mbola ho afaka ny hampiasa ny fakan-tsary sy soratra lafiny amin'ny fanompoana, na izany aza.
Ny Galaxy S8 niantsona tao DeX maody. Sary: Alex Hern ho an'ny Guardian
Endri-javatra vaovao lehibe iray hafa izay mahita ny fandefasana maneran-tany dia Samsung DeX, fohy ho an'ny Desktop Experience, izay manome fahafahana ireo mpampiasa ny S8s mba Dock ny telefaonina, ary mampiasa azy io ho toy ny feno-tsofina biraonao computing tontolo iainana, amin'ny fanaraha-maso ny fitendry sy ny totozy, sy ny fidirana amin'ny Suites toy ny Birao sy Autodesk amin'ny alalan'ny virtoaly biraonao service.
← Plantronics BackBeat Pro 2 – Review Amazon Fire TV Hazokely Review: Cheap, Lehibe TV Streaming Device →